Izwe icebo kunalokho Kunzima ukucabanga ngaphandle okugeza, elikwaziyo kube litshwayo cishe kunoma iyiphi engadini. Ungakhetha ezihlukahlukene ubuchwepheshe ekhona, kodwa ukwakhiwa okugeza emabhuloki silicate kwenza kube yinto engenzeka ukuthi sisebenzisane ngesikhathi esifushane, uthole isakhiwo high quality.
Phakathi izinzuzo izinto kufanele ukubaluleka okuyinto kuyehla ngokususa isidingo omiswe bese usebenzisa izinto zokusetshenziswa engabizi esabiwe. Ngokusho abasebenzisi, izindonga etholakala ngci, babe umsindo ukumuncwa izakhiwo kanye zikuvumela ukuthi ulondoloze ku amalahle egumbini ukushintsha, niphumule amakamelo. amakhosi Domestic agcizelele ukuthi okokusebenza engasindi, ukuze imisebenzi oyedwa uyakwazi ukubhekana nesimo, futhi asisekho isisekelo kungenziwa lula. Amayunithi makhulu ngobukhulu, ngakho-ke kuyoba ngesivinini yokwakha.
Njengoba umkhuba ubonisa, imikhiqizo kulula ukucubungula, ngakho uyokwazi ukubhekana nabo, ngisho ngamathuluzi isandla. Indaba akuyona oluvuthayo, ukuhlinzeka ezingeni lelisetulu ukuphepha umlilo. Ngaphambi ukwakhiwa elihlanza ngokuligeza amabhlogo silicate kufanele uqaphele ukuthi imikhiqizo inezici ezithile ezingathandeki. Abathengi kuphawulwe phakathi kwabo absorbability okusezingeni eliphezulu. Indaba ubamba umswakama, ngakho bazocula umsebenzi ungangenisi amanzi. AGL base kufanele anyuke angu-1.5 noma ngaphezulu. Ngemva kokuphela odongeni uzodinga ziqedwe, isibonelo, amboze usimende.
Ngaphambi kokuba uqale udinga ukunquma nalokho isisekelo ubeke. Kumila kungenzeka ukukhanya, efanelekayo ngakho columnar-band noma band melkozaglublennaya design. Ithanda inketho yokugcina, kodwa ukusetshenziswa kwalo kungenzeka ku Stony, enesihlabathi esiningi noma ubumba nenhlabathi. Uma insimu kwenhlabathi exhaphozini, okuyinto esivela eyiqhwa, kubalulekile ukusizakala ubuchwepheshe ukwakhiwa columnar-strip isisekelo.
Sebenza base columnar-tape
Uma ukwakhiwa okugeza silicate amabhlogo kuhlelwe ukuba columnar tape-based, izindawo izisekelo kumele bambe umgodi. ukujula yabo izonqunywa ngamunye, kubalulekile ukubeka eceleni kuphela lokushisa bese unyakaza yezinkathi ezithile amakholomu. Isinyathelo esilandelayo selibekiwe isihlabathi airbag kabani ukujiya akufanele idlule 15 amasentimitha. Ukulungiselela amanzi uyophuziswa futhi ohlangene embhedeni yokugcizelela yezinyoni, futhi ngemva zonke ukhonkolo uthele. Ngokulandelayo, ukulingana formwork lokhuni phakathi kwezinsika azungezwe kanye ezindaweni lapho bayobizwa elise ngodonga yangaphakathi. Khona-ke, i-ukuqinisa kanye ekubunjweni ukhonkolo.
Ubuchwepheshe yokwakhiwa strip isisekelo
Erection zokugeza emabhuloki silicate ababevame ukucula ngokwanele esisekelweni elihambayo okungukufa unproblematic kakhulu. Along azungezwe futhi ezindaweni lapho kufanele ahlele odongeni kwangaphakathi, kubalulekile ukuba amba umsele, phansi okuyinto wabeka ukweba isihlabathi ukushuba efanayo njengoba kwaba njalo endabeni engenhla. Emhlabeni imisele setha formwork lokhuni. Labeka ngaphakathi yezinyoni gcizelela, bese ungaqala ethela ukhonkolo elenziwe ngokuzimela noma kungenziwa yayala kusuka endaweni yokukhanda. Kubalulekile ukuthi ebusweni isisekelo ovundlile, ngenkathi ebeka umugqa wokuqala kuhambisana ukusetshenziswa esincane isixazululo, okuyinto has nomthelela omuhle zihlale zifudumele futhi amandla okwenza umsebenzi wokwakha.
okugeza iphrojekthi emabhuloki silicate kungenziwa yayala kusuka ochwepheshe noma lathathwa sihloko. Uzokwenza ukuba Cabanga ukuthi uyobheka isakhiwo esizayo. Ngemva kokuphothulwa isisekelo wabakhwelisa amandla, ungakwazi ukufaka umugqa wokuqala emabhuloki, okungukufa Isinyathelo esibaluleke kunazo zonke izindonga ezakhiweni zamatshe aqoshiwe. Phakathi nalokho kubingelelana, ungakwazi ukusebenzisa isando injoloba kanye isakhiwo ezingeni, lo yokugcina ezizohlinzeka ebusweni ngokuphelele flat. Ukubeka kufanele uqale kusukela emakhoneni, usebenzisa usimende nosimende. Indaba ngaphambi kokuqala ukusebenza ngamanzi. Izitini irowu olandelayo kumele kulinganiswe 15 amasentimitha kusukela irowu lokuqala amabhlogo.
Imigqa elandelayo embondelene ukwakhiwa lokusinamatselisa liyakuthela ezivuzayo olucashile futhi ubeke izinto ngononina. Uma unquma ukwakha sauna kusukela amabhlogo silicate, kubalulekile ukuba baqinise izindonga, futhi lokhu kufanele kwenziwe yonke imigqa 4 ezakhiweni zamatshe aqoshiwe. Imikhiqizo bafa anemifantu kulo ukulingana nokufakwa. Umugqa elingaphezulu, kanye uchungechunge umnyango futhi emafasiteleni, futhi, kumele kuciniswe nemigoqo. Ekuhleleni ukuvuleka kudingekile ukusebenzisa non-esayizini amabhlogo. Lapho ukufakwa zasesiteji yesikhashana esetshenziswa. Ngemva ukwakhiwa izindonga kumele kwesokunxele isikhathi esithile sokuba elapha.
Izincomo ezenziwe ukwakhiwa izindonga
Lapho kusakhiwa zokugeza emabhuloki silicate kumele ahlukaniswe kwasekusekelweni odongeni esizayo ezimbili zamatshe waterproof impahla ukufulela. Uma usebenzisa amabhlogo kokuba Usayizi 200x300x600 amamilimitha angu, kungenzeka ukuba niwabeke emphethweni, udonga Kuyophumela ethubeni amamilimitha angu-200 obukhulu. Uchungechunge lokuqala slurry wokwakha usimende okumele asetshenziswe ekubhaleni, okuyinto kuxutshwe isilinganiso ezintathu eyodwa (ratio isihlabathi usimende kweqiniso).
On the impahla ukufulela okumele asetshenziswe nge trowel 5mm isixazululo ungqimba, futhi phezu embhedeni iyunithi. Uma udinga wabona amabhlogo, ungasebenzisa grinder engela nge idayimane izindwani i ukhonkolo. Ngosizo Chainsaw ukusika imikhiqizo futhi uphendulela fast ngokwanele. Uma izindonga zifinyelela ubude obungamamitha 2.25 metres, kungenzeka ukuqala isakhiwo gables. Kufanele usebenzise ubuchwepheshe obufanayo, futhi Ridge ukuphakama 1.9 amamitha.
Kwembulunga futhi ungangenisi amanzi
Iziphethu emabhuloki silicate, okuyinto ethulwa isithombe esihlokweni isidingo sokushisa ungangenisi amanzi. Izindonga ngaphakathi upholstered nge slats sokhuni lamapulangwe ukwahlukanisa. Top ucwecwe zigutshuzelwe ifilimu nokwakhiwa ingcina itheyiphu ethe njo amalunga omzimba. Ngokulandelayo, ukwenza imisebenzi yokuqedela. Ukuze umusi, isibonelo, ungasebenzisa embhedeni ngoba eshaweni - Tile. Anteroom sebeqedile iyiphi impahla. Ngemva nokuvikela odongeni umhlobiso zingasebenzisa iyiphi impahla oyifunayo.
Idivayisi iyisithiyo umusi
umusi isithiyo umsebenzi ongenza ucwecwe kanye ifilimu "Metaspan". On the komzila kufanele ugcwalise "Metaspan" eliyifanela ngemajini ka 20 amasentimitha. Ngemva efanayo ucwecwe isetshenziswa. Lokhu umusi uyoqeda ukufinyelela emanzini futhi umusi heater, futhi ngeke ikhonze njengomPristi ezinwetshiwe ukwahlukanisa.
Yangaphandle udonga umhlobiso amabhlogo silicate
Izindlu zangasese ka amabhlogo silicate, ukubuyekezwa zazo angakuvumela ukuba sikhethe kahle, phuma ngaphandle usimende. akufanele ukuthola izixazululo esekelwe usimende. Lokhu kungenxa yokuthi ukhonkolo evundile kuzothatha umswakama kwengoma. Ukuze uqale ukulungiswa kwamanzi Kwenziwa, okubandakanya ukuhlanzwa we isixazululo kanye uthuli ngokweqile. Uma primed odongeni bese ehlanganiswa ngodaka ingxube. Ungqimba kufanele kugxilise fiberglass anezikhala, okuyinto eqondiswa odongeni ngezikulufo ezivamile.
Izindlu zangasese ka silicate amabhlogo turnkey umugqa namuhla yizinkampani okhokhelwayo. Uma sikhuluma indawo ezungeze 20 square metres, izindleko ezilinganiselwa ukwakhiwa ayizinkulungwane 250. Hlikihla.
Penoplex - kuyini? ukwahlukanisa penoplex
Priming ukhuni phambi yokudweba nge acrylic upende, uwoyela, alkyd, ukuvenisha
Rhodiola rosea. Ukusetshenziswa kanye contraindications
Yomiselela ukubopha pads - ukwenza ngcono ezokuphepha
Acoustic Bass Guitar: Izici ithuluzi